YouTube बाट SEO लिंक जुस
शुक्रबार, मार्च 4, 2011 शनिबार, मे 11, 2013 निक कार्टर
एक विशेष कुञ्जी शब्दको लागि ल्यान्डि pages पृष्ठहरूको प्रासंगिकता बढाउनको लागि मैले यूट्यूबको उपयोग गरेर धेरै सफलता पाइरहेको छु। यो एक साधारण प्रक्रिया हो र यहाँ कसरी हुन्छ यो यहाँ छ:
ल्यान्डि page पृष्ठ सिर्जना गर्नुहोस् जुन तपाईंको कुञ्जी शव्द युआरएलमा छ, हाइफन विभाजित। यसले बट्सलाई शब्दहरू फरक रूपमा हेर्न मद्दत गर्दछ र त्यसैले तपाईंको लक्षित वाक्यांशमा तपाईंको प्रासंगिकता स्वीकार गर्दछ। यस उदाहरणका लागि, म प्रयोग गर्दैछु http://www.addresstwo.com/small-business-crm/
एक भिडियो सिर्जना गर्नुहोस् जुन तपाईं यो अवतरण पृष्ठमा इम्बेड गर्नुहुनेछ। एसईओ दृष्टिकोणबाट, भिडियोको सामग्रीले केही फरक पार्दैन किनकि हामी सबैलाई थाँहा हुन्छ कि बट्स भिडियो क्रल गर्न सक्दैनन्। तर, मानव परिप्रेक्ष्यमा, निश्चित गर्नुहोस् कि भिडियो वास्तवमै सान्दर्भिक छ। जे भए पनि, यो पृष्ठ हो जुन हामी ट्राफिकमा ड्राइभ गर्दैछौं।
युट्यूब र भिडियो अपलोड गर्नुहोस् भिडियोको शीर्षकको रूपमा तपाईंको कीवर्ड वा वाक्यांश प्रयोग गर्नुहोस्। उदाहरण को लागी, मेरो भिडियो शीर्षक छ, "सानो व्यवसाय CRM"
अन्तमा, तपाईंको हाइपरलिंक घुसाउनुहोस् (http: // समावेश) भिडियोको वर्णनमा।
जब युट्यूबले यो भिडियो प्रकाशित गर्दछ, कुनै पनि स्ट्रि found फेला पर्‍यो जुन URL को ढाँचामा मेल खान्छ, HTTP का साथ सुरू गरेर, स्वचालित रूपमा त्यो URL मा हाइपरलिked्क हुन्छ। यो जहाँ अवतरण पृष्ठको यूआरएल आफैं महत्त्वपूर्ण छ किनकि तपाईं ए text्कर पाठ आफैँ चलाउन असमर्थ हुनुहुन्छ, यूट्यूबले केवल ठेगाना हाइपरलिंक गर्दछ। त्यसो भए, यूआरएल मा तपाईंको कुञ्जी शब्द छ लंगर पाठले तपाइँको लक्षित कुञ्जीपाटी समावेश गर्छ भनेर सुनिश्चित गर्दछ। उदाहरण को लागी, हाइपरलिked्क युआरएल मा हेर्नुहोस् यो युट्यूब भिडियो पृष्ठ.
तर यो कुनै फलो-लिंक होईन? पक्कै पनि यो छ। एन्कर ट्याग जुन यूट्यूबले तपाईको यूआरएलमा लपेट्यो rel = "no-follow" को विशेषता दिइनेछ। के अनुमान लगाउनुहोस्: कसले ख्याल राख्छ! जे भए पनि डब्ल्यू standard मानकले एक फलो-ट्यागको अर्थ लिनु भनेको हो, ऐतिहासिक तथ्या time्कले मेरो लागि समय र समय प्रदर्शन गरेको छ कि यी कथित अनफोल्ड लिंकले लक्ष्य यूआरएलको प्रासंगिकता बढाउन मद्दत गर्दछ। एक पोष्ट लिंक भन्दा कम प्रभावी भएता पनि, यो प्रभावी छ।
यसबाहेक, यस पृष्ठमा H1 ट्याग, शीर्षक, तपाइँको कुञ्जी शब्द समावेश गर्दछ। त्यसोभए, तपाईंसँग एक पृष्ठ छ जुन तपाईंको कुञ्जी सर्तसँग सम्बन्धित छ जुन तपाईंको कुञ्जी शब्दसँग भरिपूर्ण एch्कर पाठको माध्यमबाट तपाईंको अवतरण पृष्ठमा लि .्क हुन्छ। सजिलो छ!
अन्तिम, तर कम्तिमा होइन, अवतरण पृष्ठमा यस भिडियोलाई इम्बेड गर्नु जहाँ यो अब लिंक भएको छ एक महत्त्वपूर्ण अन्तिम चरण हो। यस इम्बेडेड भिडियोले गुगलको बोटलाई भन्छ कि पृष्ठको सामग्री वास्तवमा चाहिएको कुञ्जी सर्तसँग प्रासंगिक छ। किन? किनकि इम्बेडेड भिडियोको शीर्षकले कुञ्जी शब्द समावेश गर्दछ जुन यस पृष्ठले लक्षित गरिरहेको छ। जबकि अन्य इम्बेडेड फ्ल्यास वस्तुहरू क्रल गरिएका छैनन्, मसँग पूर्ण विश्वास छ कि गुगल बोटले युट्यूब वस्तुलाई मान्यता दिन्छ र भिडियोको शिर्षक यसको एल्गोरिथ्ममा कारक गर्दछ।
टैग: backlinksYouTubeयूट्यूब एसईओ
मार्क्स 6, 2011 मा 6: 54 PM
म एउटा सिफारिस गर्नेछु - तपाइँको लिङ्क तपाइँको सामग्री भन्दा पहिले राख्नुहोस्। धेरै मानिसहरू विस्तार गर्दैनन् र सम्पूर्ण YouTube विवरण प्रविष्टि पढ्दैनन्। तपाईंले पहिलो लिङ्क राखेर आफ्नो क्लिक-थ्रु दर बढाउनुहुनेछ भनेर फेला पार्नुहुनेछ।
अगस्ट 8, 2011 मा 10: 01 AM
वाह! त्यो गजब छ! त्यो त थाहा भएन ! तर, मसँग एउटा प्रश्न छ: यदि तपाईंले भिडियोमा टिप्पणी गरेपछि आफ्नो साइटमा लिङ्क राख्नुभयो भने, के त्यो तपाईंको व्यवसायको लागि खराब हुनेछ? मेरो मतलब, के गुगलले मेरो साइटलाई दण्ड दिनेछ? यदि होइन भने, केहि नराम्रो हुन सक्छ?
मार्स 7, 2011 मा 2: 24 एएम
मैले यो एक महिना भन्दा अलि पहिले गर्न थालेको छु र मेरो मात्र होइन तर धेरै ग्राहकहरूको लागि पनि केही वास्तविक राम्रो परिणामहरू प्राप्त गरिरहेको छु। मेरो गोप्य झोला बाहिर दिनुभएकोमा धन्यवाद। LOL।
मार्क्स 7, 2011 मा 7: 13 PM
गर्न अर्को कुरा आफ्नो भिडियो सामग्री ट्रान्सक्राइब गर्न छ। यसले यसलाई युट्युब खोजी भित्र पनि हेर्ने राम्रो मौका दिनेछ। एक जना साथीले मलाई टाउको माथि दिनुभयो http://speakertext.com जुन तपाइँको लागि धेरै काम गर्ने सेवा हो। म पक्का छु कि तपाईंले ल्यान्डिङ पृष्ठमा ट्रान्सक्राइब गरिएको पाठ समावेश गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई सार्वजनिक दृश्यबाट लुकाउन सक्नुहुन्छ जबकि अझै पनि तपाईंको पृष्ठ श्रेणीमा मद्दत गर्दछ। भिडियो सामग्रीलाई मात्र राख्नुको सट्टा वास्तवमा अनुकूलन गर्न उत्कृष्ट जानकारी र सुझावहरू।
मार्क्स 7, 2011 मा 7: 16 PM
महान जानकारी। धेरै मानिसहरूले कसरी शीर्षक भिडियोहरूले उनीहरूलाई मद्दत गर्न सक्छन् भनेर बुझ्दैनन्। स्पिकर टेक्स्ट जस्ता सेवाको साथ तिनीहरूलाई ट्रान्सक्राइब गर्ने बारे पनि हेर्नुहोस्। यसले तपाईंलाई YouTube मा ट्रान्सक्रिप्शन पोस्ट गर्न अनुमति दिन्छ जसले YouTube मा तपाईंको भिडियो सामग्री फेला पार्न सजिलो बनाउँछ। तपाईंले सायद पाठ लिन सक्नुहुन्छ र यसलाई तपाईंको ल्यान्डिङ पृष्ठमा राख्न सक्नुहुन्छ तर यसलाई दृश्यबाट पनि लुकाउनुहोस्।
मई 7, 2011 मा 3: 30 PM
धेरै जानकारीमूलक पोस्ट को लागी धन्यवाद। मेरो मात्र प्रश्न हुनेछ, किन ल्यान्डिङ पृष्ठमा भिडियो सामग्री फिर्ता डुप्लिकेट? मानिसहरूले यसलाई YouTube मा पहिले नै हेरिसकेका छन्, यसको सट्टा मुख्य सर्तहरूसँग मेल खाने फरक सान्दर्भिक सामग्री किन छैन? यो भन्दा बढी प्रभावकारी नहुन सक्छ?
मई 7, 2011 मा 4: 58 PM
महान प्रश्न। दर्शकहरू भिडियोमा पुग्ने दुइटा माध्यम छन्– एक
मतलब YouTube जस्तै भिडियो होस्टिङ प्लेटफर्ममा खोजी मार्फत हुन सक्छ,
वा YouTube मा भिडियो सन्दर्भ गर्ने मान्छे मार्फत। यद्यपि, राख्दै
तपाइँको साइट मा भिडियो खोज इन्जिन मा त्यो पृष्ठ अनुकूलन र देखिने छ
खोज परिणामहरूमा वैकल्पिक रूपमा देखाइने भिडियो पट्टीमा। जस्तै
राम्रो, यदि तपाईंसँग राम्रो सामाजिक र PR नेटवर्क छ भने - भिडियो पोस्ट गर्दै
तपाईंको ल्यान्डिङ पृष्ठमा सामग्री अझ बढी ट्राफिक आकर्षित गर्न सक्छ। अन्तमा,
यो धेरै परीक्षणहरूमा देखाइएको छ कि ल्यान्डिङ पृष्ठमा भिडियो गर्न सक्छ
रूपान्तरण दर वृद्धि। म तपाई संग एक सम्मान संग सहमत छु -
तपाईंको ल्यान्डिङ पृष्ठमा रहेको भिडियो सामग्रीसँग सान्दर्भिक छ भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्
त्यहाँ। त्यो राम्रो अनुकूलन हो!
ताल जिल्ला पैदल
मई 22, 2011 मा 10: 52 एएम
मैले आज पढेको तपाईंको माथिको लेख सबैभन्दा राम्रो र सबैभन्दा व्यावसायिक देखिन्छ र मैले You Tube हाइपरलिङ्कहरूमा केही पढेको छु भन्न चाहन्छु। उक्त नम्बर एक भिडियो खोज इन्जिन र नयाँ प्रमोट गरिएको मालिक वेब पृष्ठ बीचको सान्दर्भिकता ठूलो छ र अन्य "SEO वेबसाइटहरू" द्वारा विरलै लिइन्छ र मलाई लाग्छ कि यो मेरो मार्केटिङ रणनीतिमा धेरै सान्दर्भिक र राम्रो तार्किक निष्कर्ष हो। धन्यवाद।
मार्क्स 28, 2012 मा 4: 28 PM
यो एक उत्तम पोस्ट कली थियो।
जुन 10, 2012 मा 7: 00 PM
यूट्यूबबाट लि for्कका लागि महान लेख, यो एसईओ सल्लाहहरूको लागि
रोचक टिप र साझा को लागी धन्यवाद। गुगलले इन्टरनेटमा हुने धेरैजसो खोजहरू नियन्त्रण गर्दै, यसका विभिन्न प्लेटफर्महरूमा केही सामग्री र लिङ्कहरू हुनु प्रत्येक वेबमास्टर वा ब्लगरलाई फाइदा हुने निश्चित तरिका हो। र YouTube लाई इन्टरनेटमा दैनिक आदेश दिने विशाल ट्राफिकको साथ, ट्राफिकको लागि यसको फाइदा लिनको लागि यो भन्दा राम्रो ठाउँ अरू छैन।
जनवरी 12, 2015 11:09 बजे
उत्कृष्ट पोस्ट, सामग्री मनपर्छ। म सोचिरहेको थिएँ कि तपाईले प्रयोग गरिरहनुभएको विषयवस्तु के हो, हराउने साइडबारलाई माया गर्नुहोस्। कृपया मलाई तपाईंको सम्बद्ध लिङ्क पठाउनुहोस् यदि तपाईंले एउटा पाउनुभयो भने, टेम्प्लेट र प्लगइन प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ
जनवरी 13, 2015 3:38 बजे
हामी प्रयोग गर्दैछौं Superfly उत्तरदायी WordPress मेनू प्लगइन Codecanyon बाट उपलब्ध छ। विषयवस्तु एक उच्च अनुकूलित मौलिक विषयवस्तु हो जुन हामी अझै सुधार गर्न काम गरिरहेका छौं।
जुन 22, 2015 बिहान 5:43 बजे
दुर्भाग्यवस, तपाइँले यो कार्य गर्नको लागि भिडियो बनाउनु पर्छ जुन विज्ञापन भन्दा महँगो पर्दछ।
जुन 22, 2015 मा 10: 45 PM
म मेरो आईफोनबाट नि: शुल्क भिडियो अपलोड गर्न सक्छु! No?
ई तरल यूके स्टोर
जुन 26, 2015 मा 9: 50 PM
के तपाईंले Fiverr को बारेमा कहिल्यै सुन्नुभएको छैन?
राम्रो पोस्ट, वैसे, YouTube लिङ्क र जागरूकता को लागी एक उत्कृष्ट स्रोत हो।
29 डिसेम्बर, 2015 बेलुका 5:58 बजे
उत्कृष्ट लेख! मलाई निश्चित रूपमा जाँच गर्न आवश्यक छ।